नमस्कार गर्दा फाइदै फाइदा - Narayanionline.com
काठमाडौँ फागुन ३०-
हिन्दु वैदिक समाजका साथसाथै बौद्ध, किरात, जैन र बोन सबै ओमकार धर्मालम्वीहरुको साझा संस्कार हो नमस्कार । हाम्रा मौलिक धर्म र समाजहरुलाई जोढने एक प्रमुख संस्कार समेत हो नमस्कार । वैदिक परम्परामा भगवानको स्तुति गर्नमा होस वा सामाजिक चालचलनमा यसको विशिष्ट पहिचान छ । जुनसुकै हिन्दु धार्मिक अनुष्ठानहरु पनि नमस्कार बाट नै सुरुवात हुने गर्दछ । किटानीका साथ भन्न सकिन्छ कि भगवानको स्तुति नमस्कार विना असम्भव नै छ ।
आज विश्वमा नै नमस्कार अर्थात नमस्ते गर्ने चलन विश्वव्यापी बन्दै गएको छ । यसको वैज्ञानिक तथा आधात्मिक महत्वका कारण दिन प्रतीदिन यसको महत्व झन झन बढदै गएको छ । नमस्कार गर्दा जो कोहि पनि प्रशन्न भई गर्दछन जुन सामाजिक मयार्दा, र सम्मानको प्रयाय हो ।
नमस्ते तथा नमस्कार विचको भिन्नता
नमस्ते र नमस्कार एक आपसमा पर्यावाची शब्द हुन तथापी यसमा केहि शाब्दिक भिन्नता रहेको छ । व्याकरणको दृष्टिकोणमा नमस्ते एकवचन हो भने नमस्कार बहुवचन हो । नमस्ते सामान्यतया आफु समानको व्यक्ती लाई गरिनछ भने नमस्कार आफुभन्दा ठुला (भगवान, गुरुजन र अभिभावक) तथा सम्मानित व्यक्तीलाई गरिन्छ ।
नमस्कारको सांस्कृतिक अर्थ
नमस्ते र नमस्कार दुबै शब्द नम शब्दबाट आएको हो जसको अर्थ हुन्छ नमन गर्नु अर्थात झुक्नु वा सम्मान गर्नु । हिन्दु सनातनी परम्परा अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको हृदयमा ईश्वरको वास हुन्छ । तसर्थ एक व्यक्तिले अर्को व्यक्ति संग भेटदा नमस्कार गर्नुको अर्थ तपाई भित्रको ईश्वरलाई नमन गर्दछु भन्ने अर्थ लाग्दछ । अर्थात नमस्ते वा नमस्कार गर्दा हामी यो विचार राख्दछौँ कि तपाई म भन्दा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, म हजुरको सम्मान गर्दछु भन्ने जस्तो अर्थ लाग्दछ । नमस्कार शब्दको यस्तो गहिरो सामाजिक तथा संस्कृतिक रहस्य भएर नै होला जब हामि कसैसंग नमस्कार गरेर बोल्न थाल्दछौ तव हामिभित्रको क्रोधपना त्यत्तिकै हरायर जान्छ र हामि मित्रवत व्यवहार गर्न पुग्दछौ । यस्तो महान भावले युक्त नमस्कार पद्धतीकै कारण हाम्रो व्यवहारमा दया, क्षमा र विनय गुण व्याप्त रहेको छ ।
आधात्मिक दृष्टिकोणक अनुसार दायाँ हात आचार र बायाँ हात बिचार अर्थात दर्शनको प्रतिकको रुपमा मानिन्छ । नमस्कार गर्ने क्रममा दुबै हात एक आपसमा जोडिन्छ । मानव शरिरमा नकारात्मक र सकारात्मक दुबै तत्व हुन्छ । जब हामि मुस्कुराएर नमस्कार गर्दछौ तव हाम्रो शरिरमा सकारात्मक उर्जाको संचार हुन्छ । नमस्कार गर्दाको समयमा हामिले आशिर्वाद पनि ग्रहण गरिरहेका हुन्छौ जसले आधात्मिक विकासमा सहयोग गर्दछ ।
नमस्कारको वैज्ञानिक महत्व
आधात्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व जस्तै यसको वैज्ञानिक महत्व पनि त्यत्तिकै रहेको छ । जब हामि मुस्कुराएर नमस्ते अर्थात नमस्कार गर्छौ तव हाम्रो शरिरमा सकारात्मक उर्जा प्रवाह त हुने नै भयो यसका साथसाथै यसले मस्तिष्क तथा हृदयमा समेत अत्यन्त सकारात्मक संचार गर्दछ । नमस्कार गर्दाको समयमा हाम्रो दुबै हातको औलाहरुमा भएको हृदय चक्र र आज्ञा चक्र एक आपसमा मिल्दछन, जुन सिधै मस्तिष्क संग जोडिएको हुन्छ । नमस्कार गर्दाको समयमा दुबै हातका हृदय चक्र र आज्ञा चक्रहरु एक आपसमा मिलन भई मस्तिष्कको स्मरण शक्ति बढाउने हर्मोन हरु सक्रिय भई हाम्रो भेट लाई स्मरणिय बनाइदिन्छ, नबिर्सने बनाइदिन्छ ।
सामान्यतया नमस्कार तिन प्रकारका रहेका छन ।
१. सामान्य नमस्कार स् कुनै व्यक्ति लाई भेटदा सामान्य तवरले दुबै हात जोडि, हल्का शिर झुकाएर केहि सेकेण्ड समयको लागी आखाँ समेत बन्द गरि गरिने नमस्कार नै सामान्य नमस्कार हो ।
२. पद नमस्कार स् परिवारका मान्यजन, गुरु वर्ग तथा आमा बुबा, गुरु आदिको पाउँसमेत छोई गरिने नमस्कार नै पद नमस्कार हो ।
३. साष्टागं नमस्कार स् यसलाई दण्डवत नमस्कार पनि भनिन्छ । यस्तो प्रकारको नमस्कार केवल भगवानको शरणमा मात्र गरिन्छ ।
अतः नमस्कार गर्ने परम्पराको सांस्कृतिक महत्व, मनोवैज्ञानिक महत्व तथा वैज्ञानिक महत्य अत्यन्त सुन्दर छ । नेपाली तथा हिन्दु संस्कारको गहनाको रुपमा रहेको नमस्कार परम्परा शदियाँै पहिलेदखी चलिआएको हाम्रो मौलिक पहिचान हो । यसको प्रयोग तथा जगेर्ना हाम्रो कतव्य हो ।
आफन्तसँग ढाँटेर एक लाख ऋण लिएका युवा ११ होटलको मालिक, चितवनमा दुई होटल
चितवनमा भित्रियो सलह किरा, सतर्क रहन कृषि ज्ञान केन्द्रको आग्रह
आवुधावी टि–१० लिगः सोमपाल कामीले खर्चिए २८ रन
कावासोती नगरपालिका १० दिनसम्म लकडाउन
कोरोना अपडेट : आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ?
प्रथम सहिद लखन थापा मगरको १४४ औं स्मृति दिवस मनाइयो : नृत्य तथा भलिवल प्रतियोगिता